धन लाभ हुनुअघि मिल्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी पुरा पढ्नुस - Nawalpur Dainik
धन लाभ हुनुअघि मिल्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी पुरा पढ्नुस
जब साँचो प्रेम र विश्वासको कुरा हुन्छ, तब सबैभन्दा पहिला भगवान् श्रीकृष्ण र राधाको प्रेम जोडिन्छ ।कसैको प्रेम सफल हुने बित्तिकै हामी वाह ! कस्तो प्रेम राधा-कृष्णको जोडीजस्तो लगायतका शब्दबाट तारिफ गर्छौ । तर, राधा र कृष्णबीच अत्यन्तै निकट प्रेम भए पनि विवाह भने हुन सकेन । किन त ?आज हामी तपाईलाई श्रीकृष्ण र राधाको प्रेम किन विवाहरुमा परिणत हुन सकेन भन्ने बारेमा जानकारी गराउँदै छौ ।यस्तो पनि मान्यता छ कि, राधाले श्रीकृष्णसँग विवाह गर्न इन्कार गरेकी थिइन् ।
Prevसुत्ने समयमा यी ५ चिज सिरानीमुनी राख्नुस्, सुख र शान्ति मिल्छ !
Nextभाकल के हो, के भाकल गरेपछि बुझाउनै पर्छ, नबुझाउँदा के हुन्छ जान्न जरुरी छ! बैज्ञानीक कारण एक पटक अवश्य पढ्नुहोस्